Akụkọ - Juda brand PA
A na -akpọkwa obere ọkụ eletrik eletrik eletrik obodo. Ọ bụ ụdị ihe na -ebuli elu, nke kewara ekewa n'ime obere ihe mkpuchi ụlọ na obere ihe nrụpụta ụlọ ọrụ, nwekwara ike kewaa ya na eriri eletriki obere eriri na eriri elektrik pere mpe.
Igwe ọkụ eletriki micro dị ka ụdị ọkụ eletrik ọhụrụ bụ nke a na-eji n'ọtụtụ ebe n'ichepụta igwe, elektrọnik, ụgbọ ala, ịrụ ụgbọ mmiri, mgbakọ ọrụ na mpaghara ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na ahịrị mmepụta ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, ahịrị mgbakọ, igwe mgbakọ, lọjistik na oge ndị ọzọ.
PA ụdị obere eriri eriri eletriki wụnye ngwaahịa ọhụrụ site na ịnabata teknụzụ dị elu nke mba ọzọ. Ọ dị mfe iburu na ịwụnye n'ihi na ọ nwere obere nha na ịdị arọ. 1. Nhọrọ nkwụsị mberede.
2.With ọkwa dị elu nwere oke.
3. Klas nchedo ruo IP54.
4.With mgbochi mgbochi ngwaọrụ.
5. eriri eriri na-anaghị atụgharị.
6.Hoist etiti nhọrọ.
7.High mma moto
8. obere voltaji
Ọ nwere ike igosipụta ezigbo mma ya n'ụlọ nkwakọba ihe, ụgbọ mmiri, batching, nkata kwụgburu na oghere ọrụ dị warara. Ọ bụ ngwaahịa dabara adaba kacha mma nke ụdị kọlụm na ụdị kreening na -egbu egbu. Obere ọkụ eletrik wulitere ọdịdị mara mma, usoro ezi uche dị na ya, nrụnye dabara adaba, obere mkpọtụ, ojiji nchekwa na ntụkwasị obi, yabụ a na -eji obere ọkụ eletrik arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ, ebe a na -amụ akwụkwọ, ezinụlọ, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nri, ebe ịzụ ahịa, ịchọ mma na njikwa na ebe ndị ọzọ.
Hebei Juren Hoisting Machinery Co., Ltd (ekwentị mkpanaaka: 19833962905,03125450008 wechat: vinjing688 whatsApp: +8619833962905 kọntaktị: Wendy, adreesị: hebei qingyuan donglv mpaghara mmepe akụ na ụba) dị na obodo oge ochie nke baoding, bụ ọkachamara na -emepụta ndụ. akụrụngwa. Ụlọ ọrụ anyị na -arụpụta ihe nkedo aka, ihe mkpuchi aka, PA eriri eriri eletriki eletriki, CD1 eriri eriri eletriki eletriki eletriki eletriki igwe eletriki eletriki eletriki eletriki eletriki eletriki igwe eletriki eletriki eletriki eletriki eletriki elu na United States, Australia, Russia, Germany, Poland, Middle East na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia na obodo na mpaghara ndị ọzọ, ama ama ogologo oge.
Oge ezipụ: Jul-28-2021
Igwe ọkụ eletrik eletrik, Bannon Electric Hoist, Lever Puller, Micro Electric eriri eriri, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Ntuziaka Lever Chain ndoli,